Yohane I 3 NA-TWI - Onyankopɔn mma - Monhwɛ ɔdɔ a Agya - Bible Gateway
Yohane I 2Yohane I 4
Yohane I 3 Nkwa Asem (NA-TWI)
3 Monhwɛ ɔdɔ a Agya no dɔ yɛn. Ne dɔ a ɔdɔ yɛn no mu yɛ den ma wɔfrɛ yɛn Onyankopɔn mma. Na ɛyɛ nokware nso. Ɛno nti na wiase nnim yɛn no; ennim Onyankopɔn. 2 Me nuanom, mprempren yɛyɛ Onyankopɔn mma nanso nea daakye yɛbɛyɛ de, yennim. Nanso yenim sɛ Kristo ba a, yɛbɛyɛ te sɛ ɔno, efisɛ, yebehu no pefee. 3 Obiara a ɔwɔ saa anidaso yi wɔ Kristo mu no yɛ ne ho kronn sɛnea Kristo yɛ kronn no.